Xubno ka soo goostay Alshabaab oo isku dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed | Allsomali24.com
Xubno ka soo goostay Alshabaab oo isku dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed	Added by Ahmed Mohamed - Mogadishu on Feb 15, 2017.Saved under SOMALI NEWS	Labo xubnood oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Alshabaab, ayaa isku soo dhiibay ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan Magaaladda Baydhaba ee xarunta maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya.
Masuuliyiinta dowladda ee Magaaladda Baydhaba, ayaa sheegay in labada askeri ay wateen qoryo iyo rasaas, waxaana ay ciidanka lasoo xiriireen ka hor inta aysan kasoo tagin Alshabaab.
Taliyaha Booliiska qeybta Bay, Col. Mahad Cabdiraxmaan Aadan, ayaa sheegay in ay si wanaagsan ula dhaqmi doonaan, si dagaalamayaasha kale ee al shabaab ugu soo dhiiradaan in ay ciidanka dowladda usoo galaan.
Labda askeri ee isasoo dhiibay ayaa waxaa magacayadooda ay ku kala shegeen Isaakh Boorow iyo Maxamed Cali, waxaana ay ka dagaalamayeen deegaano ay Alshabaab ka maamulaan goboladda Gedo, Jubada hoose iyo Jubada dhexe.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa la hadal haayay in xubno ka tirsan Alshabaab ay isku dhiibi doonaan Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.